Soo dejisan UC Browser 13.2.8.1301 – Vessoft
AndroidInternetkaDareemaha WebkaUC Browser
Bogga rasmiga ah: UC Browser
UC Browser – browser caan ah oo si dhakhso ah in ay taageertaa muuqaalada waxtar leh. Faa’iidooyinka weyn ee UC Browser waxaa ka mid ah dhameystirka cinwaanada-URL dhigay goobta a, maaraynta tabs, bogagga web oo calanka u Daah degdeg ah. UC Browser ka kooban qaabeynta faahfaahsan ee web dhirta, downloads iyo baraarujin ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay isticmaalaan hababka kala duwan ee dhirta, oo ay ku jirto hababka habeenkii degdeg ah, maalinta iyo. UC Browser ka mid ah qaybo inuu wax badbaadiyo oo ay ula socdaan diinta ee gaadiidka. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay xirmaan daro ah in ballaarinta fursadaha of UC Browser.
Dhexgalka kaydinta daruurta
Hababka kala duwan ee la daawado
Tashiil iyo raad ee gaadiidka
Soo dejisan UC Browser
Faallo ku saabsan UC Browser
UC Browser Xirfadaha la xiriira